ပြည်သူနဲ့ အဆက်မပြတ်စေဖို့အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ က Radio NUG စတင်တော့မယ့်… – PVTV Myanmar
ပြည်သူနဲ့ အဆက်မပြတ်စေဖို့အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ က Radio NUG စတင်တော့မယ့်သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်သန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ (၇၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားအတွက် သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်း
ကနီမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေအကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(AAPP)က အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်း
လောပိတ-နေပြည်တော် လိုင်းမှ လျှပ်စစ်တာဝါတိုင် ၂ခုကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခဲ့တယ်လို့ ဖယ်ခုံ PDFက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 7.9K Share – 638
2021-08-18 at 7:48 PM
ရေဒီယိုလှိုင်းက အဓိကကြတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ပါတယ် တကယ်ပဲလုပ်ရမည့် အနေအထားတစ်ခုပါ
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ။
2021-08-18 at 7:56 PM
2021-08-18 at 8:06 PM
2021-08-18 at 8:08 PM
Kaung Wai Yan says:
2021-08-18 at 8:09 PM
10 band App ရေးလို့မရဘူးလား?
သားငယ္ သားငယ္ says:
2021-08-18 at 8:12 PM
နေရာတိုင်းမှာကျူးလွန်နေတာ သတင်းသမားတွေမရောက်တဲ့နေရာ internet line တွေမရတဲ့နေရာတွေမှာ ထင်တိုင်းကြဲနေကြတာကြာပြီ အမြန်အဆုံးသတ်ပြီး။ အရေးတော်ပုံအမြန်အောင်မြင်ပါစေ။
ဘ ခတ် says:
2021-08-18 at 8:14 PM
2021-08-18 at 8:22 PM
Yaw Min Thar says:
2021-08-18 at 8:41 PM
2021-08-18 at 8:45 PM
Logo idea လေးစမ်းကြည့်ထားတာပါ။
2021-08-18 at 8:46 PM
Cover photo ❤️
2021-08-18 at 8:49 PM
2021-08-18 at 8:50 PM
2021-08-18 at 9:40 PM
Myo MyoThein says:
2021-08-18 at 9:50 PM
2021-08-18 at 10:56 PM
2021-08-19 at 12:11 AM
2021-08-19 at 12:18 AM
Good night par PVDV🥰.
Dနွေဦး ရေးသားတဲ့ “အာဏာရှင်တွေကို ဥပဒေဘောင်ထဲက ရင်ဆိုင်အံတုနေသူ” ဖြစ်တဲ့ တရားလွှတ…